ကျော်ကျော်နဒ္ဒကို အချစ်စစ်နဲ့ တဖက်သက်ချစ်မိနေပါပြီဆိုတဲ့ ချိမ့်ကေကို -
ကျော်ကျော်နဒ္ဒကို အချစ်စစ်နဲ့ တဖက်သက်ချစ်မိနေပါပြီဆိုတဲ့ ချိမ့်ကေကို
By : Thet
Myanmar Idol Season3မှစပြီး ဘနားနားလို့ ပရိတ်သတ် အများအပြား သိရှိထားတဲ့ ခြိမ့်ကေကို ဟာဆိုရင် ညီမလေး မမရေလွမ်းလို့ စတဲ့ သီချင်းများ ထွက်ရှိ ထားပြီး ပရိတ်သတ် အားပေးမှု ကိုလဲ ရ ရှိ ထား တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဘနားနားဟာ အခုဆိုရင် အနုပညာလောက ထဲ ဝင်ရောက်လာပြီး သီချင်းတွေ အပြင် ဇာတ်လမ်းတိုတွေ ပါ ရိုက်ကူး နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဘနားနားဟာ ဖက်ရှင် အလန်းစားတွေ ကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ကို ဖမ်းစားထားပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်မင်းသား ကျော်ကျော်နန္ဒကို အချစ်စစ်နဲ့ တဖက်သက် ချစ်မိ နေပါပြီး
ကျော်ကျော်နန္ဒနှင့် တခြားတစ်ယောက် ဖက်နေတဲ့ ပုံ တွေ မြင်ရရင် အရမ်းခံစာ ရပါတယ်တဲ့ဗျ ။
ပရိတ်သတ်ကြီးကရော သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုသဘောရလဲ ? ဘနားနားနဲ့ သီချင်းအသစ်တွေ ထပ်ထွက်လာရင် ရော အားပေးမှာလား ?
ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ အ နု ပ ညာ အ လုပ် တွေ ရော အား ပေး ကြ မှာ လား ? သူ တို့ နှစ် ယောက် ကို ချစ် ရင် ရှယ် ပေး သွား ဖို့ မ မေ့ ပါ နဲ့ နော် ။
ကြျောကြျောနဒ်ဒကို အခဈြစဈနဲ့ တဖကျသကျခဈြမိနပေါပွီဆိုတဲ့ ခြိမျ့ကကေို
Myanmar Idol Season3မှစပွီး ဘနားနား လို့ ပ ရိတျ သတျ အ မြား အ ပွား သိ ရှိ ထား တဲ့ ခွိမျ့ ကေ ကို ဟာ ဆို ရငျ ညီ မ လေး မမရေ လှမျး လို့ စတဲ့ သီခငျြးမြား ထှကျရှိ ထားပွီး ပရိတျသတျ အားပေးမှု ကိုလဲ ရရှိထား တာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ဘနားနားဟာ အခု ဆိုရငျ အ နု ပညာ လောက ထဲ ဝငျ ရောကျ လာ ပွီး သီ ခငျြး တှေ အ ပွငျ ဇာတျ လမျး တို တှေ ပါ ရိုကျ ကူး နေ တာ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ဘနားနားဟာ ဖကျရှငျ အလနျးစားတှေ ကွောငျ့ ပရိတျသတျ တှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှု ကို ဖမျးစားထားပွီ အောငျမွငျနတေဲ့ ဖကျရှငျမငျးသား ကြျောကြျောနန်ဒကို အခဈြစဈနဲ့ တဖကျသကျ ခဈြမိ နပေါပွီး
ကြျောကြျောနန်ဒနှငျ့ တခွားတဈယောကျ ဖကျနတေဲ့ ပုံ တှေ မွငျရရငျ အရမျးခံစာ ရပါတယျတဲ့ဗြ။
ပရိတျသတျကွီးကရော သူတို့နှဈယောကျကို ဘယျလိုသဘောရလဲ ? ဘနားနားနဲ့ သီခငျြးအသဈတှေ ထပျထှကျလာရငျ ရော အားပေးမှာလား ?
ကြျောကြျောနန်ဒရဲ့ အ နု ပ ညာ အ လုပျ တှေ ရော အား ပေး ကွ မှာ လား ? သူ တို့ နှဈ ယောကျ ကို ခဈြ ရငျ ရှယျ ပေး သှား ဖို့ မ မေ့ ပါ နဲ့ နျော ။
Users Yesterday : 2450
This Month : 34372
Total Users : 329505
Total views : 1087398